7Monkeys: တစ်ပတ်အတွင်း ဖတ်သူအကြိုက် အင်တာနက်ပေါ်မှစာများ
တစ်ပတ်အတွင်း ဖတ်သူအကြိုက် အင်တာနက်ပေါ်မှစာများ
1 comments |	Tuesday, November 07, 2006
စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိူးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရရှိသည်အထိ (၈၈)မျိူးဆက်ကျောင်းသားများလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်(ဒီဗွီဘီသတင်း)
ကမ္ဘာကို ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးစုနံရံများဖြင့် ဖြတ်တောက် စိတ်ပိုင်းခြားမှု မရှိရာ၌ လည်းကောင်း၊
မနေမနားသောအားထုတ်မှုသည် နိဗ္ဗန်သို့ လက်လှမ်းသော အရပ်၌လည်းကောင်း၊
စိတ်ကို အစဉ် ပြန့်ပြူးသော တွေးဆ ပြုလုပ်မှုတို့သို့ အရှင်ရှေ့ဆောင်ရာ၌ လည်းကောင်း၊
ထိုလွတ်လပ်သော နိဗ္ဗာန်၌ တပည့်တော်၏ တိုင်းပြည်သည် နိုးကြားနိုင်ပါစေ အရှင်ဘုရား။
လူတွေဟာ တတ်စွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းကင် တမွတ် ကြယ်မစွတ် နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဓာတ်တိုင်မီးလုံးလေးလောက်တော့ တတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိရင် ဖြန့်ဝေပါ။ အတွေးအခေါ်တွေကို အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်မှု သဘောတရား အတွေးအခေါ်တွေကို နီးစပ်ရာ နီးစပ်ရာ ပြောကြပါ။ ပညာတွေ၊ အနှစ်သာရတွေကို ပိုက်ဆံရှာဖို့ တခုတည်းအတွက် မသင်မဲ့အစား ကိုယ်သိတာဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ပဲ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ သင်ကြပါ။
ငါတို့နိုင်ငံ ငါတို့အမျိူးကြီးပွားနေလျှင် ငါတို့ကိုးကွယ်သော ရှင်တော်ဘုရား၏ သာသနာတော်သည်ကြီးပွားမည်။
ဤနှုန်း အတိုင်းသာ ဆက်သွားပါက နောင်နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာသွား သည့်တိုင် တောင်းရမ်းခြင်း သည် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု တရပ် အနေ နှင့်သာ ဆက်လက် တည်ရှိ နေမည်မှာ မုချ ဧကန် ပင်ဖြစ်သည်။
ရှေ့ကို ခြေလှမ်း အနည်းငယ် သွားလိုက်၊ လမ်းဘေးမှာ ပုံလဲလိုက်၊ ပါးစပ်ကလဲ “ ဆရာတို့ရယ်၊ ကျနော် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ လို့ပါ “ လို့ ငိုသံကြီးနဲ့ တတွတ်တွတ် တောင်းပန်လိုက် နဲ့ပါ။
Opinion: “Meeting Point” by Mya Aye (an unofficial translation)
The old mother’s voice recedes with sorrow. Her cheeks are flooded with tears – her two hands are trembling. The age that is 80 years, has separated her desire from her body.
အဇာတသတ်မင်းလို ကိုယ့်ဖခင် အရင်းကို မသတ်ခဲ့ပေမဲ့
မိခင် ဖခင်နဲ့တူသော သူတွေ .. အဆွေအမျိုးနဲ့တူသော သူတွေ … မိတ်ဆွေနဲ့ တူသောသူတွေ .. သားသမီးနဲ့ တူသောသူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်၊ နှိပ်စက်၊ ညှဉ်းပမ်းခဲ့တယ်။ သနားစရာကောင်းတဲ့ လူသားတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ သူတို့ဘ၀ရှင်သန်စေခဲ့တယ်။
ကိုယ့်အလောင်းကို ကိုယ်ဖက်၍ ငိုလျက်ရှိသောညနေ (၂)
သူ့စကားထဲတွင် သဘာဝအမှန်တရားပါသည်၊ ကောင်မလေးပါသည်၊ လူသားရဲ့ရိုးစင်းမိုက်မဲမှု ပါသည်၊ စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒပါသည်၊ မေတ္တာတရားပါသည်၊ နှလုံးသား ပုံကြီးချဲ့မှုပါသည်။ အထီးအမတွေလည်းပါသည်၊ လူ့တန်ဖိုးလျှောကျမှု၊ တန်ဖိုးထားနားလည်မှု၊ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေလည်းပါသည်၊ ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကိုယ်တွေလည်း ပါသည်၊ ကျွန်တော် သူပြောသမျှအားလုံးကို ခေါင်းညိတ်ပေးနေပါသည်။
Education ဆိုတာ infra structure လား။ Super Structure လား။ ကျွန်တော်သေသေ ချာချာ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်သိတာတစ်ခုကတော့ အားရစရာဘာတစ်ခုမှ မရှိတာပဲ။ တစ်ချို့ နယ်ပယ်တွေဆိုရင် စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ မင်းကဝေဖန်ရအောင် မင်းကဘယ်လောက် တတ်လို့လည်းဆိုရင် ကျွန်တော်ဘာမှ မတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတောင်းစားတောင်ဒီလောက်တော့ ဝေဖန်နိုင်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးပါဗျာ။
ဓာတုဗေဒဘွဲ့ရ Dobson ဟာ စကြာဝဠာကြီးဘယ်လိုတည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း အလွန်အမင်းသိလိုတာဖြစ်လို့ ၁၉၅၆မှာ စုံစီနဖာရောင်းတဲ့ဆိုင်ကဝယ်ယူခဲ့တဲ့၂လက်မ မှန်ဘီလူးနဲ့ (မျက်စိနှစ်ဘက်လုံးကြည့်လို့ရတဲ့ မှန်ပြောင်း Zeiss binoculars အဟောင်းကဖြုတ်ယူထားတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ဘီလူးပါ)သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုစတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘိုရတ်ဟာအစပိုင်းမှာတော့ရပ်ပါရူးDa Ali G showရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုသာဖြစ်ပေ
learing of America for make benefit Glorious Nation of Kazakhstan"
a real nice collection..:)
Burma: in side the secret city